सार्वजनिक यातायात नि:शुल्क गर्ने देश ! – Everest Dainik – News from Nepal
सार्वजनिक यातायात नि:शुल्क गर्ने देश !
काठमाडौँ, मङ्सिर २२ । युरोपको सातौं सानो देश लक्जम्बर्गले सार्वजनिक यातायात सेवा नि:शुल्क गर्ने भएको छ । आउने वर्षको गृष्म ऋतुसम्म उसले देशभित्र नि:शुल्क सार्वजनिक यातायात सेवा उपलब्ध गराउने भएको हो ।
यसरी नि:शुल्क प्राप्त हुने सेवामा बस, रेल र ट्रामको सेवा रहनेछ । यी साधनहरूमा यात्रा गरेबापत यात्रुले कुनै पी प्रकारको भाडा तिर्नु नपर्ने बताइएको छ । लक्जम्बर्ग यसरी नि:शुल्क यातायात सेवा उपलब्ध गराउने संसारकै पहिलो देश हो ।
किन गरिँदैछ यस्तो ?
यसो गरिनाको प्रमुख कारण त्यहाँको ट्राफिक समस्या समाधान गर्नु रहेको बताइएको छ । मात्र छ लाख जनसंख्या भएको यस देशमा ट्राफिक जाम भनेनिकै ठुलो समस्याको रूपमा रहेको बताइन्छ । सरकारले पर्यावरण जोगाउने र ट्राफिक जामको समस्याबाट मुक्ति पाउन बनाएको विशेष योजना अन्तर्गत यसो गरिन लागेको हो ।
जेवियर बेटलले गत बुधबार मात्रै लक्जम्बर्गको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेका हुन् । उनले निर्वाचन अभियानको क्रममा आफूले जितेमा सार्वजनिक यातायात नि:शुल्क गर्ने बताएका थिए ।
लक्जमबर्गको राजधानी लक्जमबर्ग सिटीको यातायात व्यवस्थापन संसारमै सबैभन्दा खराब मध्ये गनिन्छ । मात्र एक लाख १० हजार जनसंख्या भएको यस शहरमा हरेक दिन ४ लाख मानिस रोजगारीका लागि आवत जावत गर्ने गर्दछन् । यो देशकै कुल जनसंख्याको ७५ प्रतिशत हो ।
विद्यार्थीलाई पहिले देखि नि:शुल्क
यहाँका विद्यार्थीहरूले भने पहिले देखि नै नि:शुल्क यातायात सुविधाको उपभ्ग गरिरहेका छन् । यहाँ २० वर्ष मुनिका विद्यार्थीहरूलाई यो सुविधा प्रदान गरिएको छ । यो सुविधा विशेष गरि माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रदान गरिएको थियो ।
तत्कालका लागि लक्जम्बर्गमा २ घण्टाभन्दा लामो यात्रा गर्न १.७८ पाउण्ड या लगभग २५६ रुपैयाँ लिइने छ । यो रकम दुई हजार पाँच सय 90 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको देश पुरै घुम्न पर्याप्त हुने छ । त्यस भन्दा कम समयको यात्रा भने पूर्णतया नि:शुल्क हुनेछ ।
सरकारले सन् २०२० सम्म सबै प्रकारका शल यातायातको टिकट सेवा बन्द गरिने जानेको छ । तर सरकारले नि:शुल्क यातायात प्रदान गर्ने नीति कसरी निर्माण गर्ने भन्नेबारे चाहिं अझै टुङ्गो लागेको छैन ।
ट्याग्स: free transport, Luxembourg